INkqubo yeFriji, iChina abavelisi beNkqubo yesikhenkcisi, ababoneleli, iFactory-Square Technology Group Co., Ltd.
Emva kweminyaka engama-50 yokuyila, ukuvelisa, ukwakha kunye nokuncedisa, sinamakhulu eenkqubo zefrijini zorhwebo kwihlabathi jikelele. Sikwaziwa ngokuyila kunye nokwakha i-CO2 cascade, iFreon, inkqubo yeAmonia emhlabeni jikelele.
Sisebenzisa kuphela iindawo zefriji ezamkelwe kwilizwe liphela. Umzekelo, iCompressor yiBitizer yaseJamani, iMycom yaseJapan. Iivalves nguDanfoss, uEmerson. Zonke iinqanawa zoxinzelelo zakhiwa endlwini ngokuhambelana ngokungqongqo noMbutho waseMelika weeNjineli zeeMechanical (ASME). Kwaye ii-welders zethu kunye neengcali ziqinisekisiwe yi-ASME. Sinesimo somatshini wokuwelda ngeplasma, iiroller, izixhobo zovavanyo lwe-radiography ukuqinisekisa ukuba iimpahla zoxinzelelo zenkqubo yefriji zithembekile kwaye ziyahlangabezana neekhowudi zoxinzelelo lwelizwe jikelele.
● Inkqubo yefriji (i-rack) iquka icompressor, isahluli seoyile, ioyile epholileyo, izivalo zolawulo kunye nezixhobo, ichibi lokugcina ifriji, ifektri, izixhobo zolawulo zombane kunye nolawulo lwePLC.
● I-compressor yamazwe aphesheya eyaziwayo kunye neempawu zokulinganisa: IMYCOM, IBITZER, KOBELCO, FUSHENG, iDanfoss, iParker
● Isiseko seqonga lesiseko sentsimbi.
Ukusebenza okuphezulu kwe-semi-hermetic kunye ne-screw compressors evulekileyo.
● Isilawuli sokubeka ziingqondo zenkqubo yakho kunye nolawulo lwecompressor, condenser, defrost, kunye nezinye izinto zokubeka ukuqinisekisa ukuzinza kwenkqubo. Isilawuli sikwabeka iliso kubushushu ukuqinisekisa ukuthembeka kwemveliso. Akukho nongenelelo lomqhubi olufunekayo ngexesha lokusebenza.
● Ulawulo oluhlangeneyo lokuhamba kombane.
● Umatshini kunye neoyile ye-elektroniki, ukutshiza, kunye nolawulo lwenqanaba lolwelo.
● Isamkeli esithe nkqo nkqo kunye nesalathi senqanaba lolwelo kunye nevalve yokunceda uxinzelelo.
● Imigca yokutsala egqunyiweyo.
● Ulwakhiwo oluqinileyo oluvuzayo kunye neetyhubhu esele yenziwe, amalunga amancinci ebrazed, ukufakelwa okuncinci.
Ukuvuza kuvavanywa kumzi-mveliso.
● Zonke iinqanawa zoxinzelelo zinokuqinisekiswa njenge-ASME, iPED ngesicelo.
● Isilawuli sescreen sokuchukumisa ubuchwephesha bubuchwephesha benkqubo yakho kunye nolawulo lwecompressor, i-condenser, i-defrost, kunye nezinye izinto ze-rack ukuqinisekisa uzinzo lwenkqubo. Isilawuli sikwabeka iliso kubushushu ukuqinisekisa ukuthembeka kwemveliso.
Idatha yobuGcisa yeCandelo le-MYCOM Semi-hermetic Compound Screw yeCompressor
Idatha yobuGcisa yeYunithi yokuCoca iCompressor ye-MYCOM
Isicelo Anjoy Group